Substance Abuse In Your Child – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Substance Abuse In Your Child
သငျ့ကလေးမှာ မူးယဈဆေးတဈမြိုးမြိုး သုံးနတော သငျဘယျလိုသိနိုငျမလဲ
လူပြိုဖျောဝငျစ လူငယျတှကွေားမှာ… ဆေးလိပျ အရကျနဲ့ မူးယဈဆေး သုံးစှဲမှူဟာ… အဓိက ပွသနာကွီး တဈခုဖွဈလာနပေါတယျ….
ဆေးခွောကျနဲ့ အရကျကတော့ ဆယျကြျောသကျတှကွေားမှာအသုံးအမြားဆုံး မူးယဈဆေးဝါး တှဖွေဈပါတယျ….
ဒီလို အဖွဈတှေ ကွားမှာ သငျ့ကလေးရှိနမေနကေို သငျဘယျလိုသိနိုငျမလဲ….
(1) အပွုအမူ ပွောငျးလဲတာ
ဒါက အစောဆုံးသိနိုငျတဲ့ လက်ခဏာ ပါပဲ… သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျးတှေ ရုတျတရကျ ပွောငျးလဲသှားတာ… မိသားစု တှေ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ သိပျဆကျဆံမှူမရှိတော့တာ…. သီးခွားတဈယောကျတညျး နလောတာ…. အရငျက သူပြျောရှငျဝါသနာပါ နှဈခွိုကျခဲ့တဲ့အရာတှကေို စိတျမဝငျးစားတော့တာမြိုးတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ
မူးယဈဆေးသုံးတဲ့ ဆယျကြျောသကျ တှဟော ကြိုးကွောငျးမခိုငျလုံဘဲ စိတျခံစားဝမျးနညျးလှယျတာ….ဒေါသတှအေရမျးထှကျလှယျတာ.. နှူတျကကွမျးတမျးလာတာ… အပေါငျးအသငျးတှေ မိသားစုဝငျတှေ အပျေါ ရိုငျးပွလာတာ…. ခိုကျရနျဖွဈပှားတာတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ
(3) ကိုယျရညျကိုယျသှေးဆိုငျရာ အပွောငျးအလဲ
ကိုယျ့ကိုယျကို ထိနျးခြုပျနိုငျစှမျးမရှိတော့တာ… ကြောငျးမှာ အဆငျ့တှကေလြာတာ… စာမေးပှဲ ကရြှူံးတာတှေ ကွုံရလာနိုငျပါတယျ
(4) ခန်ဓာကိုယျပိုငျးဆိုငျရာ အပွောငျးအလဲ
မကျြစိသူငယျအိမျ ကယျြနတော… ရုတျတရကျ ပိနျသှားတာ ဒါမှမဟုတျ ဝလာတာ… တကိုယျရညျ သနျ့ရှငျးရေး အားနညျး လာတာ… မကွာခဏ နှာခေါငျးသှေးလြှံတာ… လကျတှေ တုနျတာ… ပါးတှနေီရဲနတော…. သှေးခွဥေဒဏျရာနဲ့ တခွားဒဏျရာတှရေတာ…အားကုနျတာ…. မူးဝတောတှေ ရှိနနေိုငျပါတယျ
သငျ့ကလေးမှာ ဒီလို မူးယဈဆေး တဈခုခု သုံးနတေယျဆိုရငျ ဘယျလို ကိုငျတှယျမလဲ….
(1) ရငျးနှီး ခဈြကွညျမှူ ပိုခိုငျမာလာအောငျတညျဆောကျပါ
ဒီလိုကလေးတှဟော လုံခွုံစိတျခရြမှူကို အလိုရှိတတျကွပါတယျ… သူ့ကို စိတျကုနျပွီး လဈြလြူရှူလိုကျတာမြိုးက ပိုဆိုးတဲ့လမျးကို တှနျးပို့သလိုဖွဈတတျပါတယျ…သူနဲ့သသေခြောခြာ စစေ့ပျဆှေးနှေးပါ…ကွငျနာပါ… လေးလေးစားစားဆကျဆံပါ…ကောငျးတဲ့အခကျြတှကေိုပဲ အာရုံစိုကျပါ…. ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး မေးခှနျး တှေ မေးဖွတောက သငျနဲ့သူ့ကွားက ဆကျဆံရေးကို ပိုကောငျးစပေါလိမျ့မယျ
အမှားတှအေပျေါမှာပဲ တခြိနျလုံး အပွဈတငျနရေငျ ပွသနာတှကေို မဖွရှေငျးပေးနိုငျတဲ့အပွငျ..သငျ့ကလေးက ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု ကငျးမဲ့စပေါတယျ.. သူ့ကနျြးမာရေးအတှကျကောငျးတဲ့အလအေ့ကငျြ့တှေ ဥပမာ ဘောလုံးကစားတာ…gym ဆော့တာ ကို မှေးမွူစပေါ…အားပေးပါ…ခြီးမှမျးပေးပါ
(3) ဒီလုပျရပျတှရေဲ့နောကျဆကျတှဲတှကေို သခြောနားလညျအောငျ ပွောပွပါ
ကလေးရဲ့အသိထဲမှာ ဒီလိုလုပျနတောဟာ…. သူကောငျးဖို့မရှိဘူးဆိုတာကို သခြောယုံကွညျလကျခံတဲ့အထိ ပွောပွပေးပါ
(4) ပညာရှငျတှရေဲ့အကူအညီကို လိုအပျရငျရယူပါ
(5) သငျကိုယျတိုငျ အရကျ ဆေးလိပျ သို့မဟုတျ မူးယဈဆေးဝါး တဈမြိုးမြိုး သုံးမိနရေငျ ဖွတျပါ
(6) ကလေးကို ခြီးမှမျးပါ…ဆုခပြါ
တကယျလို့ သငျ့ကလေးက သူအရငျသုံးခဲ့ဖူးတဲ့ မူးယဈဆေး တဈခုခုကို……အခြိနျကာလတဈခုအတှငျး မလုပျဘဲ နနေိုငျခဲ့ရငျ… သူလုပျနိုငျခဲ့တဲ့နရေ့ကျတှအေတှကျ လှိူကျလှိူကျလှဲလှဲ ခြီးမှမျးပေးပါ…
ဆုပေးစနဈကိုလဲ သုံးပေးရငျ ပိုကောငျးပါတယျ
သင့်ကလေးမှာ မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုး သုံးနေတာ သင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
လူပျိုဖော်ဝင်စ လူငယ်တွေကြားမှာ… ဆေးလိပ် အရက်နဲ့ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှူဟာ… အဓိက ပြသနာကြီး တစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်….
ဆေးခြောက်နဲ့ အရက်ကတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာအသုံးအများဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါး တွေဖြစ်ပါတယ်….
ဒီလို အဖြစ်တွေ ကြားမှာ သင့်ကလေးရှိနေမနေကို သင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ….
(1) အပြုအမူ ပြောင်းလဲတာ
ဒါက အစောဆုံးသိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာ ပါပဲ… သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားတာ… မိသားစု တွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သိပ်ဆက်ဆံမှူမရှိတော့တာ…. သီးခြားတစ်ယောက်တည်း နေလာတာ…. အရင်က သူပျော်ရွှင်ဝါသနာပါ နှစ်ခြိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို စိတ်မဝင်းစားတော့တာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
မူးယစ်ဆေးသုံးတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် တွေဟာ ကျိုးကြောင်းမခိုင်လုံဘဲ စိတ်ခံစားဝမ်းနည်းလွယ်တာ….ဒေါသတွေအရမ်းထွက်လွယ်တာ.. နှူတ်ကကြမ်းတမ်းလာတာ… အပေါင်းအသင်းတွေ မိသားစုဝင်တွေ အပေါ် ရိုင်းပြလာတာ…. ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်
(3) ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တာ… ကျောင်းမှာ အဆင့်တွေကျလာတာ… စာမေးပွဲ ကျရှူံးတာတွေ ကြုံရလာနိုင်ပါတယ်
(4) ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲ
မျက်စိသူငယ်အိမ် ကျယ်နေတာ… ရုတ်တရက် ပိန်သွားတာ ဒါမှမဟုတ် ဝလာတာ… တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး အားနည်း လာတာ… မကြာခဏ နှာခေါင်းသွေးလျှံတာ… လက်တွေ တုန်တာ… ပါးတွေနီရဲနေတာ…. သွေးခြေဥဒဏ်ရာနဲ့ တခြားဒဏ်ရာတွေရတာ…အားကုန်တာ…. မူးဝေတာတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်
သင့်ကလေးမှာ ဒီလို မူးယစ်ဆေး တစ်ခုခု သုံးနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ….
(1) ရင်းနှီး ချစ်ကြည်မှူ ပိုခိုင်မာလာအောင်တည်ဆောက်ပါ
ဒီလိုကလေးတွေဟာ လုံခြုံစိတ်ချရမှူကို အလိုရှိတတ်ကြပါတယ်… သူ့ကို စိတ်ကုန်ပြီး လျစ်လျူရှူလိုက်တာမျိုးက ပိုဆိုးတဲ့လမ်းကို တွန်းပို့သလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်…သူနဲ့သေသေချာချာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပါ…ကြင်နာပါ… လေးလေးစားစားဆက်ဆံပါ…ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ…. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးခွန်း တွေ မေးဖြေတာက သင်နဲ့သူ့ကြားက ဆက်ဆံရေးကို ပိုကောင်းစေပါလိမ့်မယ်
အမှားတွေအပေါ်မှာပဲ တချိန်လုံး အပြစ်တင်နေရင် ပြသနာတွေကို မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အပြင်..သင့်ကလေးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့စေပါတယ်.. သူ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်တွေ ဥပမာ ဘောလုံးကစားတာ…gym ဆော့တာ ကို မွေးမြူစေပါ…အားပေးပါ…ချီးမွမ်းပေးပါ
(3) ဒီလုပ်ရပ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကို သေချာနားလည်အောင် ပြောပြပါ
ကလေးရဲ့အသိထဲမှာ ဒီလိုလုပ်နေတာဟာ…. သူကောင်းဖို့မရှိဘူးဆိုတာကို သေချာယုံကြည်လက်ခံတဲ့အထိ ပြောပြပေးပါ
(4) ပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီကို လိုအပ်ရင်ရယူပါ
(5) သင်ကိုယ်တိုင် အရက် ဆေးလိပ် သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါး တစ်မျိုးမျိုး သုံးမိနေရင် ဖြတ်ပါ
(6) ကလေးကို ချီးမွမ်းပါ…ဆုချပါ
တကယ်လို့ သင့်ကလေးက သူအရင်သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ မူးယစ်ဆေး တစ်ခုခုကို……အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း မလုပ်ဘဲ နေနိုင်ခဲ့ရင်… သူလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေအတွက် လှိူက်လှိူက်လှဲလှဲ ချီးမွမ်းပေးပါ…
ဆုပေးစနစ်ကိုလဲ သုံးပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်
Coughing Up Blood and Tuberculosis